Mikendry ireo mpaninjara any Serbia sy Kroasia ny DPA mikrofonosy - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny DPA Mikrofonaly dia manendry mpaninjara any Serbia sy Kroasia
Ny DPA Mikrofonaly dia manendry mpaninjara any Serbia sy Kroasia
Ho ampahany amin'ny fanolorany ny base ho an'ny mpanjifa matihanina, ny DPA Microphones dia nanendry mpaninjara vaovao roa any Serbia sy Kroasia.
Ny AVL Projekt sy LAV Projekt dia tompon'andraikitra amin'ny mikrôona avo lenta, izay ahitana vokatra mikendry ny tsenam-peo sy ny horonam-peo, ny feo mivantana, fametrahana ary fandefasana.
Ny AVL sy LAV dia mpizara efa maharitra ela sy mpanamory vahaolana audio, hazavana sy horonantsary matihanina. Izy ireo dia miresaka ny fizarana tsena DPA amin'ny alàlan'ny tambajotram-pandrafetana sy installer ary mpivarotra, izay mavitrika amin'ny teatra, mandefa ary miaraka amin'ireo orinasa fitsangatsanganana mivantana. Mahavita miasa toy ny integrators system koa izy ireo, afaka manohana ny mpanjifa hatrany amin'ny teboka voalohany ifandraisana amin'ny fanaterana sy fametrahana vahaolana amin'ny turnkey. Miaraka amin'ny fifantohana mafy aorian'ny varotra, ny AVL sy ny LAV dia nanorina laza ho mpiara-miasa azo atokisana ao amin'ny faritra.
Slobodan Veckalov, talen'ny mpitantana ny AVL Projekt, dia nilaza hoe: “Tena faly izahay rehefa misolo tena ny marika mikrô an'habakabaka lehibe. Niara-niasa tamin'ny DPA izahay taloha tamin'ny tetik'asa isan-karazany, ary izahay dia manolo-tena amin'ny vokatra ambony indrindra amin'ny portfolio an'ny marika izay zarainay.
Davor Vujic, talen'ny mpitantana ny LAV Projekt, dia nilaza hoe: "Tombontsoa lehibe sy adidy ny mampiditra ireo vokatra DPA lehibe amin'ny tsena Kroasia."
Guillaume Cadiou, Talen'ny varotra eo amin'ny faritra ho an'ny DPA Microphones, dia nilaza hoe: Efa fantatro nandritra ny fotoana kelikely ny ekipa tao amin'ny AVL, ary tsy mila mieritreritra be akory rehefa nitady solontena izahay. Izy ireo dia efa naneho fahaizana manokana momba ny feo ary efa navitrika tamin'ny andro voalohany. ”
Mino ny DPA fa ireo fanendrena ireo dia hiantoka ny fanohanan'ny mpanjifa sarobidy manerana ny sehatry ny tsena rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny AVL Projekt, tsidiho azafady www.avlprojekt.rs/en
DPA mikrô no mitarika Danoà Professional Audio mpanamboatra ny avo-tsara condenser microphone vahaolana ho an'ny matihanina fampiharana. DPAâ € ™ ny tanjona farany dia ny hanome ny mpanjifa foana ny tena tsara indrindra izay azo atao microphone vahaolana ho an'ny rehetra ny tsena, izay ahitana feo velona, ​​fametrahana, fandraisam-peo, teatra sy ny fandaharana. Raha mikasika ny fizotry ny famolavolana, DPA tsy mandray hitsin-dalana. Sady tsy ny orinasa marimaritra iraisana eo amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana, izay natao tao amin'ny DPA orinasa any Danemark. Ho vokany, DPAâ € ™ ny vokatra eran-nidera ireo noho ny miavaka mazava sy mangarahara, manam-paharoa fepetra arahana, faratampony azo itokisana ary, ambonin'izany rehetra izany, madio, uncolored sy undistorted feo.
Ny DPA Vaovao 4560 CORE Binaural Headset mikrofonony dia manamboatra ny fahazoana feo tsy misy aina - Desambra 2, 2019
Youki Yamamoto mpamoron-kira mankafy ny fahazazan-jaza amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny PMC vaovao - Novambra 26, 2019
Ny olombelona dia nanangana ny mozika nanangana ny fanaraha-maso manodidina azy tamin'ny PMC - Novambra 21, 2019
AV Projekt fampitana injeniera fampitana Engineering Kroasia mpizara DPA mikrô Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor LAV Projekt Serbia Spears & Arrows Video injeniera	2019-09-11
Previous: Miara-miasa amin'ny V-Nova miaraka amin'ny Simplestream ho an'ny New Pan-African Streaming Service MVMO
Next: Dalet Media Cortex mandrisika Hatramin'ny haino aman-jery mahery an'isa AI